"लाजरिलो डे टोरम्स" कसले पढेन? साहित्य समाचार
कसले "लाजरिलो डे टोरम्स" पढेका थिएनन्?
केवल यस पुस्तकको उल्लेख गरेर मेरो दिमाग समयमै पछाडि यात्रा गर्दछ र हाई स्कूलको पहिलो वर्षहरूमा रोकिन्छ। कती हुन्छ? तेह्र वा चौध वर्ष, सायद। र म जस्तै मलाई लाग्छ कि तपाईं धेरैले यो पुस्तक "आधा" पढ्नुभएको छ जुन भाषा र साहित्य शिक्षकले विशेष गरी त्यस वर्ष खेलेको हो।
सत्य यो हो कि मलाई यो पढ्नको कुनै खराब सम्झनाहरू छैन, आज पूर्णतया अप्रचलित भाषामा भए पनि र यसलाई पढ्नको लागि लगभग स्कूलको विषयको दायित्व बाहिर। तपाईं त्यो विपरित भन्न सक्नुहुन्छ, मलाई लाग्छ मलाई त्यो याद छ मलाई यो समय मनपर्‍यो र म फेरि पढ्न मन पर्दैन यदि मसँग प्रशस्त पेन्डिंग छैन र यति धेरै नयाँ र राम्रो किताबहरू भेटिएन भने। हामी यस लेखको बारेमा अर्को लेखमा किताबहरू पुनः पढ्ने वा नयाँ पठन सुरू गर्ने बारेमा कुरा गर्नेछौं (यस विषयको बारेमा तपाइँ के सोच्नुहुन्छ?)।
ठिक छ, आज म तपाईंसँग यस बारेमा कुरा गर्न आउँछु पिकरेस्क शैली शैली उपन्यास र यसको महत्व यसको समयमा थियो।
पहिलो पिकरेसिक शैली उपन्यास
यो एक अर्को पिकरेस्क उपन्यास जस्तो लाग्न सक्छ, तर यो जस्तो छैन, बिल्कुल विपरीत, यो "लाजारिलो डे टोरम्स" यसको अनन्य महत्त्व छ जुन अन्य पिक्सेरक शैली उपन्यासमा छैन, र यो यो हो कि यो आफ्नो प्रकारको पहिलो उपन्यास हो।
De अज्ञात लेखक आज, धेरै लेखक धेरै बर्ष उहाँलाई प्रतिबद्ध गरिएको छ, तीमध्ये: जुआन डि ओर्तेगा, डिएगो हूर्ताडो डे मेंदोजा, भाइ जुआन र अल्फोन्सो डि वाल्डेस, सेबास्टियन दे होरोजको वा लोप डे रुगेडा लगायत अन्यहरू।
भन्नु पर्दैन, यो एक स्पेनिश उपन्यास हो, द्वारा Epistolary शैली र छ पहिलो व्यक्ति मा लेखिएको। सब भन्दा चाँडो प्रकाशन मिति हो 1554। यो एक त्यस्तो उपन्यास हो जुन त्यतिबेलाको स्पेनिश समाजको लागि ठूलो गम्भीर अवस्थाको साथ हो, यो एकदम यथार्थवादी हो, यहाँसम्म कि यसको सीमा पनि क्रूरता इतिहासको केहि क्षणहरूमा।
लाजरस, नायक, हो नम्र मूल र धेरै गरीब, त्यसैले तिनीहरू पत्ता लगाउनु पर्छ क्रूर, कपटी समाजमा बाँच्न र धेरै गाह्रो। अर्को, हामी यस पुस्तकको कथा पढ्ने सबै चरणहरूको सारांश दिन्छौं, ती मध्ये धेरै लाजारोको "मास्टरहरू" सम्बन्धित:
लाजरसको उत्पत्ति: उसको आत्मकथा विवरण उनको जन्म र बाल्यावस्थाको अवस्थाको वर्णन गरेर सुरू हुन्छ, दु: ख र पूर्ण गरीबीले चिह्नित।
अन्धा मानिस, आफ्नो पहिलो मास्टर: लाजारोकी आमा उसलाई अन्धा मान्छेलाई धेरै जवान मान्छे दिन्छन्। उहाँसँगै उनले बाँच्न सिक्नुपर्नेछ जब ऊ ठूलो विपत्तिहरूबाट गुज्रिरहेको छ। यस समयमा जब लाजारो सबैभन्दा धूर्त जित्छ।
वर्ग, उनको तेस्रो प्रेम: अन्धा मान्छे पछि, लजारोले लोभी र स्वार्थी पादरीको सेवा गर्दछ जसले उसलाई कहिले पनि खुवाउँदैन र पछि स्क्वायर आउँछ। यो र उसको महान पूर्वाग्रहहरूले उसलाई काम गर्नबाट रोक्छ, त्यसैले खाना पकाउन र यसलाई बाँड्नको लागि प्रबन्ध गर्ने लजारो फेरि उनी हुन्। यो अल्छी स्क्वायर, तथापि, लाजरोलाई आदरका साथ व्यवहार गर्ने पहिलो हो, तर ऊ भाग्छ र फेरि वेटर एक्लै रहन्छ।
धेरै सेवा: लाजारो एक friar, एक बैल विक्रेता, एक पादरी, र एक बेलीफ सेवा गर्दछ। यसपछि उनले टोलेडोमा शहर क्राइवरको रूपमा रोजगारी पाए र सान साल्भाडोरको आर्कप्रिस्टकी दासीसँग बिहे गरे।
सैन साल्भाडोरको आर्चप्रिस्टको स्टेज: अन्तमा, लजारोले केही समृद्धि हासिल गर्न सफल भएका छन् र उनी आफ्नी श्रीमतीको वरिपरि रहेको गफ वा उनको अभिप्रायसँगको सम्बन्धको वास्ता गर्दैनन्। यसको एउटा उदाहरण पुस्तकबाट निकालेका निम्न अनुच्छेदमा देख्न सकिन्छ:
- L tongzaro de Tormes, जसले नराम्रा भाषाहरूको कुरालाई हेर्नु पर्छ कहिल्यै फलिफाप हुँदैन। म यो भन्छु किनभने तपाईंको श्रीमती मेरो घरमा पस्छिन् र उसलाई छोडेर गएको देखेर म हैरान भएन। उनी तपाईंको सम्मानमा धेरै छिर्छिन् र उनको। र यो म तिमीलाई वाचा गर्छु। त्यसकारण उनीहरूले के भन्न सक्दछन् भनेर नसोच्नुहोस्, तर तपाईको हितमा म के भन्छु।
"सर," मैले भने, "मैले राम्रो मान्छेहरूसँग नजिक जाने निर्णय गरें।" यो सत्य हो कि मेरा केहि साथीहरूले मलाई त्यसबारे केही भनेका छन् र तीन पटक भन्दा बढि तिनीहरूले मलाई प्रमाणित गरे कि उहाँ मसँग विवाह गर्नु अघि उनले तीन पल्ट जन्म लिइन् र तपाईंको अनुग्रहको आदरपूर्वक बोले, किनकि ऊ अगाडि छ तिम्रो।
El Azar लाजारिलो डे टोरम्सA एक साहित्यिक क्लासिक हो, जस मध्ये एक तपाईले आफ्नो जीवनमा कम्तिमा एक पटक पढ्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कसले "लाजरिलो डे टोरम्स" पढेका थिएनन्?
मानुएल बोनो भन्यो
आजसम्म ती जो पढ्न रमाईलो स्वतन्त्रताको आधार हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकेनन्।
म्यानुएल बोनोलाई जवाफ दिनुहोस्
साहित्यमा ब्वाँसाहरू। वास्तविक, प्रतीकात्मक, सधैं मनमोहक।
सोल अगुइरेसँग अन्तर्वार्ता, "कुनै दिन हप्ताको दिन होईन"।